एकनारायणको सांगीतिक सफलता : एउटा गीतले विदेशिनबाट रोक्यो !
काठमाडौं – नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा डेढ दशक बढी समयदेखि चम्किरहेको नाम हो – एकनारायण भण्डारी ।
२०५८ सालदेखि सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय एकनारायणले लेखेका दर्जनौं लोकदोहोरी, आधुनिक तथा फिल्मी गीत स्रोता–दर्शकको जिब्रोमा कण्ठ छन् ।
समयक्रमसँग एकनारायण लोकप्रिय गीतकार बने पनि कुनै समय भने उनी संगीत क्षेत्रप्रति एकदमै निराश थिए । यतिसम्म कि उनले संगीतमा भविष्य नदेखेर विदेश जान पासपोर्ट समेत बनाइसकेका थिए ।
स्याङ्जाको गल्याङमा जन्मिएका एकनारायणको सानैदेखिको रुचिको क्षेत्र थियो संगीत । एकनारायणले तत्कालीन उच्च माविसम्म गाउँमै पढे । त्यसपछि गीत लेखेर नाम र दाम कमाउँछु भन्दै २०५९ सालमा स्याङजाबाट काठमाडौं आए ।
काठमाडौं आएपछि गायक बुद्धिसागर बस्यालसँग मिलेर ‘बुढेसकालैमा’ बोलको गीत ल्याए । गीत लोकप्रिय बन्यो । संघर्षकै समयमा बुद्धिसागरमार्फत उनको चिनजान संगीतकार सुरेश अधिकारीसँग भयो । एकनारायण एकपछि अर्को गीत लेख्दै गए ।
गीत त बिक्यो तर एकनारायणलाई काठमाडौंमा बाँच्न गाह्रो थियो । ‘काठमाडौं आएदेखि नै केही वर्ष निकै कष्टकर रुपमा दिनहरू बिताए,’ लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनी सम्झन्छन्, ‘त्यो बेला प्रायः सबैको पारिश्रमिक निकै कम थियो । अझ म त गीतकार परें । त्यो पनि नयाँ । अझ त्यो समय आ–आफै गीत लेख्ने चलन थियो ।’
एक त गीतकारलाई थोरै पैसा दिए हुने, त्यसमाथि संघर्षको दिनमै तोकेरै पारिश्रमिक माग्दा अवसर नै गुम्ला भन्ने पनि डर थियो उनमा । त्यसैले जति पाइन्छ त्यति नै पारिश्रमिक लिन्थे एकनारायण ।
कतिले त पछि दिने भन्दै टार्थे । त्यो समयसम्म उनका ‘डाँफे नाचेर, मेरो मनैको फूल टिपी’, ‘मूल हौ भने रसाइदेऊ’, ‘आउँदै गर मालती’, ‘आओ यादहरू आओ’, ‘छमछम पाउजुले’, ‘आमाले घाँस काट्दै गर्दा’ लगायतका गीत लोकप्रिय बने । लोकप्रियताकै बीच पनि उनलाई आर्थिक समस्याले थिचिरहेको थियो ।
‘गीतकारको पारिश्रमिक निकै कम थियो । थुप्रै गीत लोकप्रिय हुँदासम्म पनि मलाई काठमाडौंमा टिक्न गाह्रो परिरहेको थियो,’ एकनारायण सम्झन्छन् ।
... त्यो एउटा गीत
कुरा २०६४ सालको हो । वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएको १ वर्ष पुगेको थियो । बढ्दो जिम्मेवारी, बढ्दो लोकप्रियता । तैपनि एकनारायणलाई काठमाडौंमा टिक्न गाह्रो थियो । एकनारायणले आगामी बाटोबारे २ वटा विकल्प बनाए । आफ्नै कम्पनीबाट एउटा मात्र गीत ल्याउने, त्यो गीतले संगीतलाई निरन्तरता दिने नत्र विदेश जाने ।
एउटा गीत लेखेर तयार गरे तर रेकर्ड गरेनन् । पहिले गाउँ गएर पासपोर्ट बनाएर फर्किए । क्रण तथा साथीहरूको सहयोगमा आफ्नै कम्पनी ‘सितारा म्यूजिक प्रालि’ दर्ता गरे ।
‘पासपोर्ट बनाएर आएपछि संगीतमै लागिरहने, नत्र घर नफर्कि विदेशिने मनस्थिति बनाए,’ एकनारायण विगतका दिन सम्झँदै भन्छन्, ‘यी २ वटा विकल्पमा मेरो जिन्दगीको फैसला अडाएको थिए ।’
एकनारायणले गीतमा लगानी गरे । ‘सुपारी चाम्रो’ गीतको अडियो तथा भिडियो आफ्नै कम्पनीबाट बजारमा पठाए ।
सौभाग्य ! ‘सुपारी चाम्रो’ गीतले एकनारायणलाई विदेशिन दिएन । गीत दिन दुईगुणा रात चौगुणाको हिसाबले लोकप्रिय भयो । गीतको अडियो मात्र होइन, भर्खर मोडलिङमा आएका शंकर बिसी र सम्झना बुढाथोकी अभिनित भिडियोलाई पनि दर्शकले औंधी रुचाए ।
‘त्यसदिनदेखि काठमाडौंमा खान–बस्न, मन फुकाएर खर्च गर्न गाह्रो भएन,’ उनी सफलता सम्झन्छन्, ‘शुरूमा हजार क्यासेट बजारमा पठाएको थिए । १ वर्षसम्म हजारको दरमा क्यासेट बिक्री गरे ।’ १ वर्षमा १ लाखप्रति क्यासेट बिक्री भएको एकनारायण सुनाउँछन् ।
त्यसयता उनले आफ्नै कम्पनीबाट गीतहरू बजारमा ल्याउँदै गए । ‘लालुपाते नुघ्यो भुँइतिर’ गीतले पनि एकनारायणलाई राम्रै फाइदा दिलायो । गीतको लोकप्रियता मात्र होइन, आर्थिक हिसाबले पनि एकनारायण सबल बन्दै गए ।
हालसम्म आउँदा उनले जनजिब्रोमा झुण्डिरहने दर्जनौं गीतहरू स्रोता–दर्शकलाई दिइसकेका छन् । एकनारायण हरेक गीतमा नयाँपन दिन चाहन्छन् । गीत गरिदिनुप¥यो भन्नेलाई कहिल्यै निराश बनाउँदैनन् ।
लोकदोहोरी, आधुनिक, फिल्मी सबै विधामा उनका गीतले स्रोता–दर्शकको मन जितेका छन् । ‘तिर्खा लाग्यो पानी खाएँ’, ‘मलाई बाँसुरीले रुवायो’, ‘मेरो मनैको फूलटिपी’, ‘कम्मरमाथि पटुकी’, ‘म बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन हो’, ‘मूल हौ भने रसाइदेऊ’, ‘आउँदै गर मालती’ लगायत गीत केही पहिलेका उदाहरण भए ।
‘मलाई जसले पनि किन रुवाउँछ’, ‘नाइँ मलाई थाहा छैन्’ होस् वा ‘रातो पछ्यौरी’, कान्छी वे कान्छी’, ‘बुट्टे रुमाल’ पछिल्ला केही लोकप्रिय गीतका उदाहरण हुन् ।
प्रदर्शनरत चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’को ‘जिन्दगी नै भन्दिन’मा पनि एकनारायणकै शब्द छ । एकनारायणले संगीतमा हिजो देखेको सपना आज पूरा भएको छ ।
‘संगीतमा मैले हिजो देखेको सपना पूरा भएको छ,’ एकनारायण सन्तुष्टि सुनाउँदै भन्छन्, ‘संगीतले खान–लाउन पुगेकै छ । संगीतकै कारण विदेशमा पसिना बगाउन परेको छैन । स्रोतादर्शकको माया पाएको छु । एकदमै सन्तुष्ट छु ।’
रमिला न्यौपानेको तीज गीत ‘पशुपतिमा’ सार्वजनिक
मनिषाको अभिनयमा 'युट्युबभरि हिट' सार्वजनिक [भिडियोसहित]